China Rotary Ultrasonic Welding Machine Compact Ultrasonic Seam Welding Machine orinasa sy mpanamboatra | Powersonic
Horn: Steel / titaniu
35Khz fitaovana fantsom-pandrefesana rotary ultrasonika amin'ny famaohana ultrasonika
35Khz ultratra rotary ultrasonic dia natao ho an'ny fanjairana fanjairana ultrasonic.
Ny ltrasonic dia azo ampiasaina amin'ny karazan-damba sy plastika vita amin'ny olona, ​​miaraka amin'ny lamba voajanahary koa azo ampiasaina amin'ny atiny farafahakeliny of farafaharatsiny farafahakeliny 60%moplastic.
Fitaovana ampiasaina be amin'ny tombo-kasemanangona sy manapaka kitapo tsy misy fanjaitra fanjairana amin'ny akanjo maivana sy lamba fanatanjahan-tena miditra amin'ny fehikibo Velcro sns.Na dia mitovy endrika sy fiasa amin'ny milina fanjairana mahazatra aza, ny bonneur SeamMaster High Profile dia manana alalana ambony kokoa eo anelanelan'ny kodia sy ny tandroka, ka mahatonga azy io ho an'ny fampiharana an-tanana miaraka amin'ny fandeferana mafy, na rehefa miasa manodidina ny fiolahana.
Ny milina fanjairana ultrasonic dia be mpampiasa ary mora ampiasaina mba hamoahana, hanapaka, hanisahana, hanapahana, hametahana, hametahana azy, na hanapahana sy hamehezana azy ireo miaraka. Ny fizotran'ny ampiasain'ny milina fanjairana ultrasonic dia haingana, tsotra ary mahomby.
Teknolojia azo ovaina tokoa izy io. Noho ny fahaiza-mampifanaraka ny endriny dia azo atao ny mametraka ny milina fanjairana amin'ny toeram-piasana na mametraka azy ao anaty rafitra semi na automated automatique.
Haben'ny vibration (a) 15 ~ 25 µm
Fitaovana fitaovana vy / titane
Sakany welding 7mm amin'ny max
Fampiharana milina fanjairana ultrasonic:
Ny milina fantsom-pandrefesana ataontsika dia namboarina tsara ho an'ny fandidiana make-up amin'ny fampiharana isan-karazany toy ny: fiarovana ny masoandro na asa hafa amin'ny lamba teknika na tenona tsy misy tenanao. Farany, ity fitaovana marobe sy mahaleo tena ity dia ahafahanao manao lamina famehezana isan-karazany.*Teknolojia ultrasonictsy azo ampiasaina afa-tsy amin'ny lamba sentetika (miaraka amina fibre synthetic farafahakeliny), thermoplastics na vokatra thermo-fusible rehetra. Azo antoka, aza misalasala mifandray aminay amin'ny fitsapana ultrasonic na fisedrana welding.
Ny fampiasana milina fanjairana ultrasonic dia miteraka tombony maromaro:
Fanenomana haingana sy mahomby;
Seams azo zaka;
Tsy mila fanjifana toy ny kasety, clip na lakaoly;
Vokatra tsy tapaka;
Tsy misy fotoana mangatsiaka sy mampihena ny vidin'ny fikolokoloana;
Tsy misy fotoana fitifirana ho an'ny fitaovana stapler;
Mijanona amin'ny lahasa iray
Tsy mila fanjaitra, kofehy, kofehy ary hetsika rehetra mifandraika amin'ny fampifanarahana loko, ny fananganana, ny famolahana ary ny fanetezana;
Sariaka amin'ny tontolo iainana satria tsy mila adhesives na solvents;
Voaisy tombo-kase ny sisiny nefa tsy mamela lavaka stitch akory, ka misoroka ny fidirana amin'ireo mpitsabo simika, ireo otrikaretina azo avy amin'ny ra sy ireo singa hafa.
Hahery 20Khz Ultrasonic Welding System f ...
Steel Horn Ultrasonic Welding Fitaovana Compact Ultr ...
15khz avo lenta ultrasonic welder & T ...
20Khz haingam-pandeha masinina ultrasonika ho an'ny Di ...